Retail Franchises maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Retail Franchises
Ego Nyere Franzụpụta Ihe Franchise
Mkpọpụta Mkpebi Kacha ọhụrụ
Ugboro abuo kọfị
Anyị na-enwe agụụ mgbe niile banyere ije kọfị ozi kachasị mma kachasị mma kemgbe ụbọchị mbụ. Ọ bụ ole ka ọtụtụ n'ime anyị ...
NKE HALAL GLOBAL - World HALAL CONVENIENCE STORE FRANCHISE na-ebili nke Halal maka ndị Alakụba na ndị na-abụghị ndị Alakụba ...
Etinye ego na a kọfị azụmahịa ebe ị na-enweta kwa ọnwa na-ekwe nkwa alaghachi, a kediegwu òkè nke kwa afọ Efrata, gbakwunyere anyị ...
Thelọ ọrụ na-ere ahịa abụwo nnukwu ụlọ ọrụ mgbe niile kamakwa ụlọ ọrụ dị iche iche nke ukwuu ebe ọ bụ na mkpọsa azụ nwere ike isi na akwa gaa na ngwaahịa nri na ihe niile dị n'etiti.
Ugbu a, anyị ga-edepụta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ banyere uto na nso nso a ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahụla n'ụwa niile. Ọzọkwa nke a kwesịrị inyere onye ọ bụla na-achọ ịzụrụ aha aka azụmaahịa iji hụ akụkụ niile na-eto na afọ ndị gara aga yana amụma uto ọhụrụ maka afọ ndị na-abịanụ.
N’afọ 2019, ihe ịtụnanya n’ahịa UK abịala UK £ 394 ijeri British pound.
Retazụ ahịa mba ụwa atumatu na ha ga-eru puku dọla iri atọ site na afọ 30, site na ihe ruru ijeri US dollar iri abụọ na asaa na 2023
Enwere ugbu a ihe karịrị ụlọ ahịa 309,000 na UK niile
Gịnị ka ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka mpaghara azụmaahịa?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ a na-egosi na mpaghara ndị na-ere ahịa na-abawanye na ọ bụghị naanị US na UK, mana n'ụwa niile. Ngalaba azụmaahịa bụ mpaghara nke na-aba ụba na-achọsi ike
Na mgbakwunye, ọ na-eto kwa afọ na-egosighi ihe ngosipụta nke uto ngwa ngwa ma na-agbasa ngwa ngwa. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a nwere ike na-atụ aro ugbu a nwere ike ịbụ oge kwesịrị ekwesị itinye ego na nnukwu ngalaba a. Ọ bụrụ na ejighị n'aka na ị ga-ahọrọ ma m na-atụ aro ka ị nwee ihu ọma dị mma site na otu mkpọsa ahịa franchise gị iji chọta ohere nrọ gị.
Mmechi gburugburu ụlọ ọrụ na-ere ahịa.
N'ozuzu ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-egosi mmụba oge niile. Ọzọkwa ọ nwere ike ịbụ nnukwu oge iji lelee ngwa ahịa ndị metụtara teknụzụ n'ime mpaghara azụmaahịa. Kemgbe nke ahụ gosipụtara mmụba kachasị na afọ iri gara aga ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-atụkwasịkwu obi na teknụzụ iji nweta ngwaahịa ha ugbu a abụghị onwe ha. Ma ọ bụrụ na ijighi n'aka na ịchọrọ ịre ahịa ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị iko tii gị. M na-atụ aro ka anyị lelee ndekọ anyị ebe ọ bụ na Franchiseek bụ nnukwu ndekọ aha franchise na-enye ọtụtụ franchise maka ọrịre iji gboo mkpa gị.
Soro ọnụahịa egwuregwu UK na-eduzi ụmụaka Kwadebe ụmụaka maka ọdịnihu site na iji klọọkụ na teknụzụ na-akpali akpali.